I-villa yonke/I-POOL/Igceke/I-Centro/umbhede ongu-5/Igumbi lokugezela eligcwele eli-5 - I-Airbnb
I-villa yonke/I-POOL/Igceke/I-Centro/umbhede ongu-5/Igumbi lokugezela eligcwele eli-5
Guadalajara, Jalisco, i-Mexico
I-Tendrá face exclusivo de toda la casa y la alberca.
Siyinakekela ngokwedlulele le ndawo maqondana nokuhlanza. Futhi singahlinzeka ngamasevisi engeziwe njengokuthenga igrosa , noma yini esingayengeza endaweni ephephile nejabulisayo.
Indawo yokuqala yokulungiswa kabusha kwezakhiwo zika-2015 nguHulumeni wedolobha. Isilinganiso ngele-villa yonke, amasudi emibhede ayi-5 ngalinye linegumbi lokugezela eligcwele lesimanje.
QAPHELA: I-Desgraciadamente no alquilamos la casa para sesiones de fotografía nizodwa ngo-1-2 noches. Gracias.
UKUSETYENZISWA KAKHULU KWEZINDLU KANYE NECHIBI. Ayikho enye impahla efana nalena eGuadalajara. Yaklonyeliswa ngendawo yokuqala edolobheni lonke ngoFebhuwari 2015 ukuze ilungiswe kahle kakhulu yimeya yedolobha kanye nomkhandlu womlando wokuhlela amadolobha. I-villa yase-mexican evuselelwe kabusha eyaqala ngekhulu le-19. Indlu iwubucwebe bezakhiwo, indawo yokuhlala eyingqayizivele enamakamelo ezivakashi avulekile anezici zesimanje ezinikeza umuzwa we-hip ne-chic ukuya kobuhle.
Ukulungiswa okubanzi kwenziwe kumapayipi amanzi, ugesi kanye nezindlu zokugezela ezintsha ezizimele eziqukethe iziqongo zokubala ze-granite. Ekuqaleni yonke into yayakhiwe egcekeni eliphakathi nendawo futhi ibonakala kanjalo namuhla, ihlinzeka ngombono wangaphakathi ongeke ukubone kunoma iyiphi enye indlu. I-Palacete ingenye yezindawo zokuhlala eziphambili zaseGuadalajara, eqashelwa ngoqwembe lomlando eceleni komgwaqo ongaphandle ngenxa yezakhiwo zayo ezimangalisayo.
Indawo ehlala kuyo iyikhola eluhlaza okwesibhakabhaka enezitolo zokulungisa izinto kodwa iyaphila kakhulu futhi uma isingaphakathi endlini, kuthule futhi kunokuthula. Vele uphumule ngemva kohambo lwakho lwansuku zonke futhi ujabulele ichibi noma i-cocktail. Le ndawo inamagumbi okulala amahlanu atholakalayo ngalinye linamagumbi okugeza angasese, esimanje. Ngaphezu kwalokho indawo evamile ihlanganisa ikhishi elihle, futhi-ke, ichibi. Ngisho noma uhamba neqembu, indlu inikeza indawo eyanele, kusukela ekhishini elihlukanisiwe kuya endaweni yokudlela, egcekeni eliphakathi, elinikeza ubumfihlo obuningi.
Sinikeza ubuchwepheshe obuningi mayelana nedolobha ngendlela ongathanda ngayo. Lokhu kungase kusuke kuseluleko sendawo yokudlela kuye ekunikezeni ulwazi lokuthenga noma eminye imininingwane ephathelene nedolobha noma isiko lase-mexican. Umaqondana wami wazalelwa edolobheni futhi ngihlale kusukela ngasekupheleni kuka-2008. Uma unemibuzo, vele ubuze.
I-Palacete itholakala eduze kwedolobha nezinye izindawo ezifana ne-chapultepec lapho uzothola khona izindawo zokudlela zasebusuku kanye nezindawo zokudlela ezisukela kumandla aphezulu kuye ezikhululeke kakhudlwana. Kukhona indawo yokumisa amatekisi eduze nekhona ukusuka endlini, ngaphambi nje kwesonto lase-mexicaltzingo, kanye nezinketho zokupaka uma ukhetha ukuqasha imoto.
Uma ungajwayele idolobha, uzothola ukuthi linomuzwa omncane futhi onamandla lapho ungahlangana khona nabantu bendawo abathakazelisayo nabangaphandle okuzokukhombisa ukumomotheka okufudumele, okwenza ukuhlala kwakho e-guadalajara kube umcimbi wamasiko.
Isimo sezulu sivame ukufana nentwasahlobo, asikaze sibe nomswakama, kodwa sihlala sinelanga. Uma uhlala e-mexico noma uvakashela nje, i-villa izokunikeza okuhlangenwe nakho okuphephile nokuyiqiniso.
ubusuku obungu-7 e- Guadalajara
4.89 · 138 okushiwo abanye
Umakhelwane ungenye yezindala eGuadalajara, ikhola eluhlaza okwesibhakabhaka, enezitolo eziningi zokulungisa. Kuphephile emindenini eminingi, isonto eliseduze, kanye ne-mercado ukuze uthenge izithelo, imifino, inyama. Ukuphila kwasebusuku kuwuhambo lokuhamba ngezinyawo noma ngetekisi elifushane kodwa hhayi endaweni yokuzwa ibanga ukuya endlini.
Siyasabela kakhulu futhi sizohlinzeka ngosizo olukhulu ngangokunokwenzeka. Lokhu kusuka ezincomo zezindawo zokudlela kuye olwazini olumayelana nokuthenga, njll. Ngokuvamile angikho edolobheni ngenkathi indlu iqashwa ithimba lendoda/unkosikazi lihlanzekile, liphatha, lihlola izivakashi.
Siyasabela kakhulu futhi sizohlinzeka ngosizo olukhulu ngangokunokwenzeka. Lokhu kusuka ezincomo zezindawo zokudlela kuye olwazini olumayelana nokuthenga, njll. Ngokuvamile angikho…
Hlola ezinye izinketho ezise- Guadalajara namaphethelo